System Administrator - Hurbad
System Administrator qofka ah wuxuu qaban karaa shaqooyinka, sida rakibitaanka hardware ka iyo kushubista Softwares-ka, Maamulka servers-ka iyo tijnolojiyada taala data center ka sida servers-ka, abuurista account yada iyo diyaarinta server-ada cusub ee lagu soo darayo data center-ka, la socoshada wax qabadaka qalabka shirkada iyo casriyayntooda. cilad bixintuna waa midaan ka marnayn meesha, sugida amniga guud sida adeegsiga access controls, backups, firewalls. tababarka xubnaha cusub ee kusoo biiri doona kooxda ITga. diiwaan galinta ciladaha iyo xalkooda.
Mushaarka lagu shaqeeyo bishii USA/UK: $4,050*
Mushaarka lagu shaqeeyo bishii Somalia: $500*
Koorsooyinka lagu noqdo System Administrator
Xirfadaha shaqo ee looga baahanyahay qofka SysAdmin-ka ah waxaa kamid ah; Aqoonta Client OS, Server OS, Qalabka Networks (LAN iyo WAN), Security System sida IDS, Backup iyo Recovery, Xirfadaha shaqsiyeed ee looga baahanyahay waxaa ka mid ah; habdhaqan wanaagsan iyo cod kar nimo, kalnoosi, xoog furnaasho.
Microsoft 365 Certified: Windows 10 (Exam MD-100)
Modern Desktop Administrator, waxaad ku baranaysaa sida loo howgaliyo Windows 10
Koorsadaan waxaad kubaranee aasaaska Microsoft 365 waana bilowga barasha Microsoft 365 Productivity Services.
Koorsadaan waxaa lagu baranayaa Windows Server 2016
Koorsadaan waxaa lagu baranayaa Windows Server 2019
Koorsadaan waxaa lagu baranayaa System Center Configuration Manager.
Koorsadaan waxaa lagu baranayaa Red Hat Enterprise Linux Server.